I-Brazilian B&B - Ifulethi Lamaholide e-Holland
Ifulethi lamaholide epulazini elincane emaphandleni ase-Dutch eligama lingu-Olinda Flor Braziliaans B&B, elisendaweni yasemaphandleni yaseNyakatho Brabant kanye nohambo lwehora eliyisigamu sehora ukusuka e-Den Bosch.
Leli fulethi elincane lamaholide eBerlicum lihlanganiswe ngemuva kwendlu yasepulazini endala, kodwa enomnyango wayo wangasese. Lapho uzothola i-1 suite ene-Jacuzzi namakamelo okulala ama-2, ikhishi elincane elingu-1 negumbi lokuhlala, futhi ngaphandle, kukhona ithala elinendlu encane engadini.
Injabulo yokungenisa izihambi neyasemaphandleni, endaweni eluhlaza nokuthula, lapho uzothola khona i-1 suite ene-whirlpool, amakamelo okulala angu-2 anezindlu zokugezela ezihlanganyelwe, ikhishi elincane elingu-1 elinegumbi lokuhlala elihlanganisiwe eli-1 nangaphandle, kukhona ithala elinendlu encane engadini. Ifulethi lingakwazi ukuhlalisa abantu abangafika kwabayi-8, lilungele imindeni, noma iqembu elincane, noma umbhangqwana noma ngisho nomuntu ofuna ukuphumula noma ukusebenza ngokuthula.
Indawo ikude nedolobha elinamapulazi amancane namasimu endaweni ezungezile, futhi yiqiniso ihlathi elihle, imizuzu eyi-10 nje yokuhamba. Indawo ekahle yalabo abafuna ukuthula, ukuzola nokuxhumana nemvelo, kude nezindawo zasemadolobheni.
U-Olinda Flor BB ucezu oluncane lwaseBrazil ngaphakathi kweNetherlands. Lesi sikhala sinegumbi lokuphumula eline-TV, osofa namatafula ahlanganiswe nekhishi. Ekhishini isivakashi singathola umenzi wekhofi kagesi, i-toaster, itiye kanye nesidlo sasekuseni esincane esifakwe esilinganisweni sansuku zonke (namaqanda, ibhotela, ujamu, amaqebelengwane nezinkwa), lapho ungalungisa khona ukudla kwakho kwasekuseni okuncane. Siphinde sibe nesitofu sikagesi esincane nohhavini, i-microwave, isiqandisi kanye nazo zonke izinto zasekhishini ezidingekayo ukuze izivakashi zizizwe zikhululekile. Futhi ekhishini, kukhona isiqandisi esincane esinemenyu yase-Brazilian (TTKEUKEN) lapho ungakwazi khona (ngemali encane eyengeziwe) uzame ukunambitheka okuncane okuhlukile kwe-cuisine yase-Brazilian.
Yonke indawo yokuhlala inokushisa okuphakathi nendawo namafeni ngezinsuku ezishisayo zasehlobo. Emakamelweni sihlinzeka ngamathawula, ama-shampoos, izingubo zokulala namashidi, asevele afakiwe kumazinga. Indawo yokuhlala ine-Wi-Fi nendawo yokupaka yamahhala yangasese.
Leli fulethi elincane leholide lase-Brazil/Dutch, u-Olinda Flor BB, ufuna ukuthi uzibonele lesi simo sobulula besiko lase-Brazilian Pernambuco ngokusebenzisa izindawo ezihlotshiswe ngomkhathi wendabuko wangaphakathi enyakatho-mpumalanga ye-Brazil. Ibonakala ngobulula nokufudumala, okuyinhlanganisela yePernambuco yaseBrazil nendawo yasemaphandleni yaseBrabant.
Ifulethi linamakamelo okulala ama-3, i-suite eyodwa enkulu kanye namagumbi amabili okulala engeziwe. Ekuqaleni, kungaqashwa kuphela igumbi le-Itamaracá kanti amanye atholakala ngokwesidingo sokuhlalisa abantu abaningi eqenjini elifanayo endaweni. Le nqubo iyadingeka ukuze kuvinjwe ingozi yokutheleleka nge-corona, ngakho-ke irenti ilinganiselwe emndenini owodwa, eqenjini elifanayo, umbhangqwana noma umuntu.
Indawo inokungena kwayo futhi izimele kuyo yonke indlu kanye nethala elincane elinendlu engadini, efakwe ukushisa kwezinsuku zasebusika kanye nesitofu sokhuni esincane. Konke lokhu kunomthelela ekutheni izivakashi zibe nobumfihlo obukhulu futhi zijabulele indawo enokuthula, yasemakhaya. Izivakashi zingaphinda ziqashe amabhayisikili alula ngemali encane.
Amakamelo Ethu: (Ngenxa yenhlekelele ye-corona, sinikeza amakamelo ngokukhethekile iqembu, umbhangqwana noma umuntu). Isisekelo yi-Imaracá, amanye amagumbi angabhukhwa. Kunamakamelo angu-3 akhethekile, omathathu atholakala esitezi sokuqala.
- Igumbi le-Imaracá elinendlu yokugezela yangasese.
Igumbi le-Itamaracá litholakala esitezi sokuqala futhi lihlotshiswe ngezinto ezenziwe ngezandla kuphela eBrazil. Leli gumbi lifakwe umbhede wabantu ababili onethezekile, umbhede owengeziwe kanye nebhentshi lokubeka izikhwama, ikhabethe elincane lezingubo, izingubo zokulala, imicamelo nezihlalo kanye netafula lombhangqwana ukuze ujabulele iwayini elimnandi. I-Itamaracá Room ineyayo yokugezela ewubukhazikhazi enebhavu le-spa.
Igumbi le-Garanhun- Igumbi lase-Garanhuns elinegumbi lokugezela elabelwe, elingabhukha kuphela uma lihlanganiswe ne-Itamaracá.
s itholakala esitezi sokuqala futhi ihlotshiswe nangezinto ezenziwe ngezandla ezitholakala eBrazil kuphela. Leli gumbi lifakwe umbhede ophindwe kabili onethezekile, umbhede usofa, ibhentshi lokubeka izikhwama zakho, ikhabethe elincane lezingubo, izingubo zokulala, imicamelo nezihlalo kanye netafula lombhangqwana ukuze ujabulele iwayini elimnandi.
Leli gumbi linendawo yokugezela ehlanganyelwe enethezekile enekamelo lokulala elengeziwe.
- Igumbi le-Caruaru elinegumbi lokugezela elihlanganyelwe, lingabhukwa kuphela lihlanganiswe ne-Imaracá.
I-Caruaru Room iyigumbi elihlotshiswe ngokugcwele ngesitayela sase-Brazilian ngezinto ezenziwe ngesandla ezivela e-Brazil kanye nomhlobiso oyingqayizivele wase-Brazil. Inombhede ophindwe kabili onethezekile, ibhentshi lokubeka izikhwama zakho, ikhabethe elincane lezingubo, izingubo zokulala, imicamelo nezihlalo kanye netafula ukuze ujabulele iwayini elimnandi.
Itholakala phakathi kweMiddelrode, Berlicum neDen Bosch. Futhi inikeza injabulo yokungenisa izihambi nezindawo zasemakhaya, endaweni eluhlaza nenokuthula yepulazi elisemaphandleni elisemakhaya aseBrabant. Kuyidolobhana elithulile, elinendawo ezungezile nezinye izigodi ezincane ongazivakashela ngemizuzu eyi-15 nje ngemoto futhi uthole izindawo zokudlela, izingadi zetiye, amathilomu kanye namasimu; ngaphezu kwenqaba, ipulazi likamela, indawo yekhofi ngaphakathi kwesigayo, nezindlela ezihlukahlukene ezinqamula emaphandleni, ezingajatshulelwa ukugibela inqola emboziwe, noma ukuhamba ngezinyawo, noma ukuhamba ngebhayisikili. Futhi eduze nalapho ifulethi likhona, ungajabulela indawo yaseshashalazini evulekile phakathi nehlathi elinothile eliluhlaza.
I-Berlicum itholakala maphakathi nemvelo. Kule ndawo kunezindawo ezimbalwa zokubuka nemisebenzi. Sikubhalele ezinye lapha.
I-Wamberg Huis (umzila)
I-Kersouwe Natuurtheatre (umzila)
I-Schutskooi Manege (umzila)
I-Meierijse Museumboerderij (umzila)
Kasteel Heeswijk (umzila) Kilsdonkse Molen (umzila)
I-Jazz e-Duketown (umzila) Paaspop (umzila)
Molen of Zwaan, Vinkel